Zaikabe ho amin’ny fampananana asa sy fampivoarana ny tanora – METFP
📌Tafiditra indrindra ao anatin’ny velirano faha 6 ny fampanan’asa mahavelona ny tanora. Anisan’ireo mifanome tanana amin’ny fanjakana amin’ny fanatrarana izany tanjona izany ny « Organisation Internationale du Travail » (OIT) sy ireo sampan-draharaha mivondrona ao amin’ny Firenena mikambana.
➡️Nisy noho izany ny zaikabe ho amin’ny fampananana asa sy ny fampivoarana ny tanora izay nosokafana tamin’ny fomba ofisialy ny alakamisy 05 mey 2022 tetsy amin’ny CCI Ivato, ary notarihin’Andriamatoa Praiministra Lehiben’ny Governemanta, NTSAY Christian izay sady mpiahy ny hetsika.
Anisan’ireo mpikambana ao amin’ny governemanta nanatrika izany Ramatoa VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa.
✅Tanora avy amin’ny faritra 23 no mandray anjara amin’ity hetsika maharitra roa andro ity, izay nampitondrana ny lohahevitra « tanora iray, asa mendrika iray » . Izany no hatao dia ny ahafahana mamolavola antontan-kevitra sy vina iraisan’ny tanora, mifanaraka amin’izany lohahevitra izany.
©️SCOM METFP/ Mai 2022